Vonomoka Tao Rabaa , Le Caire : Telo Taona Izay No Lasa, Mbola Miraikitra Ny Fofon’ny Fahafatesana · Global Voices teny Malagasy
Vonomoka Tao Rabaa , Le Caire : Telo Taona Izay No Lasa, Mbola Miraikitra Ny Fofon'ny Fahafatesana
Voadika ny 01 Septambra 2016 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, عربي, Ελληνικά, Italiano, English
Sary miparitaka be ho fahatsiarovana ny fahatelo taonan'ny vonomoka tao Rabaa. Nozarain'i Peter Youssef tao amin'ny Facebook.
Nianatra tao amin'ny oniversite iray izay nandrenesako feom-basy matetika noho ny fanakorontànana nataon'ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany aho. Nahazatra ahy, toy ireo hira mafy fanaon'ireo mpanao hetsi-panoherana teo ambanin'ny trano midongona tafo ao amin'ny oniversiten'i Le Caire, ny fahitako ireo mpikendry mahay avy amin'ny tafika miaraka amin'ny basiny.
Niditra tao amin'ny sampam-pianarana momba ny Toekarena sy ny Siansa Politika aho, valo volana taorian'ny fanombohan'ny Revolisiona Ejipsiana. Tamin'ny fotoana niovàn'ny tantara, nandray vondronà mpianatra marobe samy nanana ny firehany politika ny Oniversiten'i Le Caire. Sarin'ny fihenjanana eo amin'ny sehatra politika ao amin'ny tanin'ireo Faraona izany.
Tsy mbola nanatri-maso velively ny fihenjanana mahatezitry ny rivotra ara-politika sy ny hetsi-panoherana tarihan'ny mpianatra aho, tahaka ilay iray izay voafehy taorian'ny fanaparitahana ny fitorevahana tao Rabaa el Adaweya, antsoina ankehitriny hoe Vonomoka tao Rabaa. Hitako ireo bala tena izy nitifirana ny vavahady fidirana, ireo fiara mpamonjy voina tao amin'ny Oniversite, ary ny habetsahan'ny entona mandatsa-dranomaso natifitra ireo mpanao diabe izay nanameloka ny fandatsahan-drà nataon'ireo mpitandro filaminana ejipsiana tao amin'ny kianjan'ny Rabaa el Adaweya.
Nambara nanerana an'i Ejipta, ny maraimben'ny 14 Aogositra 2013, ny fampiharana ny lalànan'ny tany misy hotakotaka satria noravan'ny mpitandro filaminana tamin-kerisetra ireo fitorevahana nokarakarain'ny Firahalahian'ny Silamo, mpanohana manohitra ny fanonganana an'i Mohamed Morsi, filoha ejipsiana voalohany voafidy tamin-kalalahana sady mpiasam-panjakana ambony taloha tao amin'ny Firahalahian'ny Silamo. Fampiasàn-kery nahafatesana olona 1.000 tao anatin'ny andro iray. Ny fitorevahana tao amin'ny kianjan'ny Rabaa el Adaweya no fitorevahana lehibe indrindra nanaovana bemidina. Rehefa nandeha ny fitifirana, dia ireo fiara mifono vy no naka ny toerana ary nisidina nanodidina ilay toerana ny angidimby.
Ny toerana manodidina ny Maoske Adiweya ao Rabaa tamin'ny 1 Aogositra. Hipok'ireo mpanohana ny Firahalahian'ny Silamo izay natory tao anaty tranolay efa ho iray volana mahery. Nentin'ny fianakaviana ny ankizy mba hiarovana azy ireo amin'ny fandravana an-keriny ataon'ny mpitandro filaminana amin'lay fitorevahana. SARY : H. Elrasam ho an'ny Voice of America, avy amin'ny Wikimedia Commons
Faritra nisy ady io.
Ny hopitaly sahan'ny fitsaboana izay ihazakazahana'ny olona hitondrana ireo vatana mitsitra hiala ny afo no nokinendrin'ny tifitra variraraka. Niezaka nanao ireo famonjena farany ny mpitsabo.
Tsaroako ny lahatsary iray tafaporitsaka nisy mpitsabo nihiaka hoe : ” vaky ny tratra, vaky ny loha ary nipotsaka ny atidoha. Vita ny aminy. Inona no azoko atao ? Inona no azoko atao ?”
Tsy tany aho.
Tsy tany aho, fa nahita kosa ilay lahatsary. Hitako ireo sary izay voarakitra ato an-tsaiko tamin'ny fotoana nahitako azy ireo. Sarinà tranolay may, akanjo mihoson-drà, reny mitomany. Hitako ny tovovavy iray nigogogogo teo an-tratran'ny anadahiny, nanatri-maso ny fialàny aina.
Tsy tany aho, fa nahita ilay namako akaiky nigogogogo teo amin'ny anadahiny izay voatifitra teo amin'ny tendany. Tsaroako ny feony kendakenda tamin'ny finday nilaza fa tsy hitany tamin'ireo faty marobe ny fatiny. Tsaroako ny feon'ireo fidradradradràna nanodidina azy.
Tsy tany aho, fa hitako ireo razana nitandahatra tao anaty vatampaty fotsy, miandry ny fangalan'ny havany azy tao amin'ny Maoske-n'i Le Caire. Tahaka ny fasam-bahiny. Toy ny fasana iombonana taorianà ady izay norakofan'ny bolongana ranomandry ireo faty ary namendrahany fanalàna fofona mba hanaronana ireo fofona maimbo.
Kianjan'i Rabaa taloha sy taorian'ny 14 Aogositra 2016. SARY : Mazidan (CC BY-SA 3.0)
Tsy tany aho, fa hitako ilay reny iray namantatra ny endrik'ireo faty tao amin'ny tranompaty, nitady ny zanany lahy tao anatin'ireo vatana may sy voatifitra.
Tsy tany aho, fa voaraiko ny vaovao momba ilay mpiara-nianatra tamiko izay voatifitra raha nandositra avy any amin'ny faritra atsimon'ny toby.
Tamin'izay fotoana izay, tany aho.
Tany aho nijery ireo haino aman-jery nankasitraka ireny famonoana ireny. Nankasitraka ny jadona, ny famoretana, ary ny fandripahana ireo izay tsy nanaraka ilay fandaharanasa politika tsy misy fandeferana. Tany aho tamin'ny fotoana niantsoana ireo olona novonoina ho ” mpampihorohoro” ary ireo mpamono ho “mpamonjy”.
Niainako izany rehetra izany.
Amin'izao fotoana izao ilay kianja dia tahàka ny faritra mahazatra sy be olona any Le Caire . Ankehitriny, tsy misy mahatsiaro fa vao tsy ela akory izay no nanavatsavàna ny tifitry ny miaramila mpitifitra sangany mba ho ery am-pita.
Manako ao an-tsofiko ny feonà bala isaky ny mandalo eo amin'io toerana io aho. Mamelona indray ireo fahatsiarovana ilay toerana mahasorena sy feno fiara mifamezivezy. Mampahatsiahy ahy ilay fifohana entona mandatsa-dranomaso izany, ary toy ny mihosin-drà ireo sarivongana tànana anankiroa dia mampiseho ny mpitandro filaminana sy ny tafika.
Miaraka amin'ireo niharam-boina tamin'ny vonomoka tao Rabba ny fisainako manontolo. Mbola miraikitra ny fofon'ny fahafatesana.
Sary : Dikasary avy amin'ny tati-baovaon'ny AlJazeera momba ny vonoan'olona maro ataon'ny Herim-pamoretana any Ejipta.